यी चार महिनामा जन्मिने महिलामा हुन्छ लक्ष्मीको रुप जन्नुहोस कुनकुन महिना हो ! – Krazy NepaL
February 11, 2021 459
जन्म महिना दिन गते बार समयले व्यक्तिको भविष्यमा निकै प्रभाव पारेको हुन्छ । जबकी कोही व्यक्ति यति भाग्यमानी हुन्छन् उनीहरुले हरेक कार्यमा सफलता हाँसिल गर्न सफल भएका हुन्छन् हिन्दु परम्पराअनुसार महिलालाई लक्ष्मीको रुपमा लिने प्रचलन रहेको छ लक्ष्मीलाई धनकी देवी भनेर पुजा गर्ने गरिन्छ । त्यसकारण आज हामी तपाईहरुलाई चार महिनामा जन्मिएका महिलाहरुको बारेमा बताउन गइरहेका छौँ । जसलाई लक्ष्मीको रुपमा लिइन्छ ।
फेब्रुअरी महिना यो महिनामा जन्मिने महिलाहरु निकै बुद्धिमानी हुने गर्छन् । ग्रह चालको कारण यो महिनामा जन्मिने महिलाहरु विवाहपछि पनि भाग्य निकै चम्कन्छ । त्यसकारण फेब्रुअरी महिनामा जन्मने महिलालाई लक्ष्मीको रुपमा लिने गरिन्छ अप्रिल महिना यो महिनामा जन्मिने महिलाहरु छिट्टै आफ्नो लक्ष्यमा पुग्ने गर्छन् ।
सधै भाग्यले साथ दिने भएकाले उनीहरु प्रगतिको पथमा हुने गर्छन् । विवापछि पनि उनीहरुको कारण पतिलाई शुभ शुभ हुनेछ जुन महिना जुन महिनामा जन्मेका महिलालाई शास्त्रले खासै राम्रो नमानेपनि उनीहरुलाई भाग्यले सधै साथ दिएको हुन्छ । उनीहरु जुझारु र कर्मठ हुने भएकाले मेहनतलाई खेर जान दिँदैनन् । त्यसकारण यो महिनामा जन्मिने महिलालाई भाग्यले सधै साथ दिन्छ सेप्टेम्बर महिना यो महिनामा जन्मने महिलाहरु मेहनत नगरेपनि सजिलै सफलता पाउन सक्छन् । उनीहरुले विवाहको लागि पनि धनि केटा भेट्छन् ।
Prevघरमै बसेर कपाल स्ट्रेट बनाउन चाहानुहुन्छ ? अपनाउनुहोस् यी घरेलु उपाय
दिदीको बयान : भाइलाई यहिबाट धके’लिदिए